Usoro na ọnọdụ - LinuxCapable
Emelitere ikpeazụ: July 05, 2021
Biko gụọ usoro na ọnọdụ ndị a nke ọma tupu iji Ọrụ Anyị.
Nkọwa na Nkọwa
Nkuzi na ntuziaka
Mmachi nke Ibu
"D IS KA Ọ B” "na" D AV KA Ọ D ”" Nkwupụta
Maka Ndị Ọrụ European Union (EU)
Iwu United States
Nsogbu na Waiver
Mgbanwe na Usoro na Ọnọdụ Ndị A
Okwu nke edobere mkpụrụedemede izizi nwere mpụtara n'okpuru ọnọdụ ndị a. Nkọwa ndị a ga-enwe otu ihe ọ pụtara n'agbanyeghị ma ha pụtara na otu ma ọ bụ ọtụtụ.
Maka usoro na ọnọdụ ndị a:
Mgbakwunye pụtara ihe na-achịkwa, na-achịkwa ma ọ bụ na-ejikarị njikwa ya na ndị otu, ebe "njikwa" pụtara ịnwe 50% ma ọ bụ karịa nke mbak, mmasị nha ma ọ bụ nchekwa ndị ọzọ nwere ikike ịme ntuli aka maka ntuli aka nke ndị isi ma ọ bụ ikike njikwa ndị ọzọ.
Country na-ezo aka: Western Australia, Australia
Company (nke a na-akpọ ma "Ụlọ ọrụ", "Anyị", "Anyị" ma ọ bụ "Anyị" na Agreement a) na-ezo aka na Linux Ike.
Device pụtara ngwa ọ bụla nwere ike ịnweta Ọrụ dịka kọmputa, ekwentị ma ọ bụ mbadamba dijitalụ.
Service na-ezo aka na weebụsaịtị.
Usoro na ọnọdụ (nke a na-akpọkwa "Okwu") pụtara Usoro na Ọnọdụ ndị a nke mejupụtara nkwekọrịta niile dị n'etiti gị na ụlọ ọrụ ahụ maka iji Ọrụ ahụ. Emepụtara nkwekọrịta a na Usoro site na enyemaka nke Usoro na ọnọdụ jenerato.
Ndị ọrụ Social Media nke atọ pụtara ọrụ ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla (gụnyere data, ozi, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ) nke ndị ọzọ gosipụtara, gụnye ya ma ọ bụ mee ya.
Weebụsaịtị na-ezo aka Linux Ike, inweta site na https://www.linuxcapable.com
ị pụtara onye ahụ na-enweta ma ọ bụ jiri Ọrụ ahụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ, ma ọ bụ ihe iwu ọzọ na-ekwuchitere onye dị otú ahụ na-enweta ma ọ bụ jiri Ọrụ ahụ, dị ka ọdabara.
Ndị a bụ usoro na ọnọdụ na-achịkwa ojiji nke Ọrụ a yana nkwekọrịta na-arụ ọrụ n'etiti Gị na Companylọ ọrụ ahụ. Ọnọdụ ndị a akọwapụtara ikike na ọrụ nke ndị ọrụ niile gbasara ojiji Ọrụ ahụ.
Ị nweta na iji ọrụ a kwadoro na nnabata gị na nnabata gị na usoro na ọnọdụ ndị a. Usoro na ọnọdụ ndị a metụtara ndị ọbịa niile, ndị ọrụ na ndị ọzọ na-enweta ma ọ bụ jiri Ọrụ ahụ.
Site na ịnweta ma ọ bụ iji Ọrụ ahụ, ị ​​kwenyere na ị ga-ejide ya na Usoro na ọnọdụ ndị a. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị n'akụkụ ọ bụla nke Usoro na ọnọdụ ndị a, ị gaghị enweta ọrụ ahụ.
Na-anọchi anya na ị gaferela afọ 18. Companylọ ọrụ a anaghị anabata ndị na-erughi 18 ka ha jiri Ọrụ ahụ.
Enwekwara ohere ịnweta na ojiji nke Ọrụ ahụ na nnabata gị na nnabata nke amụma nzuzo nke ụlọ ọrụ ahụ. Amụma nzuzo anyị na-akọwa atumatu na usoro anyị gbasara mkpokọta, ojiji, na mkpughe ozi nkeonwe gị mgbe ị na-eji ngwa ma ọ bụ webụsaịtị wee gwa gị gbasara ikike nzuzo gị yana otu iwu si echekwa gị. Biko gụọ amụma nzuzo anyị nke ọma tupu iji ọrụ anyị.
Ọrụ anyị nwere ike ịnwe njikọ na webụsaịtị ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ enweghị ma ọ bụ na-achịkwa ya.
Companylọ ọrụ ahụ enweghị njikwa yana ọ nweghị ọrụ ọ bụla maka weebụsaịtị ma ọ bụ ọdịnaya ọrụ ndị ọzọ, atumatu nzuzo, ma ọ bụ omume. Ị gara n'ihu kwenye ma kwenye na Ụlọ ọrụ ahụ agaghị abụ ọrụ ma ọ bụ kwụọ ụgwọ, ozugbo ma ọ bụ na-apụtaghị ìhè, maka mmebi ọ bụla ma ọ bụ mfu kpatara ma ọ bụ ebubo na ọ kpatara ma ọ bụ na njikọ nke iji ma ọ bụ ịdabere na ụdị ọdịnaya, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ dị na ya. ma ọ bụ site na webụsaịtị ma ọ bụ ọrụ ọ bụla.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ usoro na ọnọdụ yana atumatu nzuzo nke weebụsaịtị ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ ị gara.
Nkuzi emebere ma dokwabere na www.linuxcapable.com bụ naanị maka ebumnuche mmụta. Enweghị nkwa ma ọ bụ akwụkwọ ikike enyere ma ọ bụrụ na ihe ga-agahie. Iji bụ ihe ize ndụ nke gị, wee hụ na ị ga-akpachapụ anya dị mkpa tupu iji ozi ọ bụla dị ka nkwado ndabere na mpaghara nseta ihuenyo.
Anyị nwere ike kwụsị ma ọ bụ kwụsịtụ ohere gị ozugbo, na-enweghị ọkwa mbụ ma ọ bụ ụgwọ, maka ihe ọ bụla, gụnyere enweghị mmachi, ma ọ bụrụ na ị mebie Usoro na ọnọdụ ndị a.
Mgbe ị kwụsịrị, ikike gị iji Ọrụ ahụ ga-akwụsị ozugbo.
N'agbanyeghị mmebi ọ bụla ị nwere ike ịkpata, ụgwọ niile nke Ụlọ ọrụ na nke ọ bụla n'ime ndị na-eweta ya n'okpuru ndokwa ọ bụla nke Usoro a na ọgwụgwọ gị maka ihe niile e kwuru n'elu ga-ejedebe na ego ị kwụrụ site na Ọrụ ahụ ma ọ bụ 100 USD ma ọ bụrụ na Ịzụtabeghị ihe ọ bụla site na Ọrụ ahụ.
Ruo n'ókè kachasị nke iwu nwere ike, na ọ dịghị ihe ọ bụla Ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụ ndị na-ebubata ya agaghị akwụ ụgwọ maka mmebi ọ bụla pụrụ iche, mberede, na-apụtaghị ìhè, ma ọ bụ na-akpata ihe ọ bụla (gụnyere, ma ọnweghị oke na, mmebi maka mfu nke uru, mfu nke data. ma ọ bụ ozi ndị ọzọ, maka nkwụsị azụmahịa, maka mmerụ ahụ nkeonwe, mfu nke nzuzo na-esite na ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla metụtara iji ma ọ bụ enweghị ike iji Ọrụ ahụ, ngwanrọ ndị ọzọ na/ma ọ bụ ngwaike ndị ọzọ ejiri na Ọrụ ahụ, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ na njikọ ọ bụla nke Usoro a), ọ bụrụgodị na Ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụ onye na-ebubata ngwaahịa a dụrụ ọdụ maka ohere nke mmebi dị otú ahụ na ọbụna ma ọ bụrụ na ngwọta ahụ adaghị nke nzube ya dị mkpa.
Steeti ụfọdụ anaghị ewepu akwụkwọ ikike ma ọ bụ mmachi nke ụgwọ maka mmebi mberede ma ọ bụ nke ga-ebute, nke pụtara na ụfọdụ mmachi ndị a nwere ike ghara itinye. Na steeti ndị a, ụgwọ onye nke ọ bụla ga-abụ oke oke oke iwu nyere ikike.
A na-enye gị ọrụ ahụ "DỊ KA Ọ BỤ" na "DỊ KA Ọ dị" yana mmejọ na ntụpọ na-enweghị akwụkwọ ikike ọ bụla. Ruo oke oke ikike n'okpuru iwu dị, ụlọ ọrụ ahụ, n'aha ya na nnọchite ndị mmekọ ya na ndị nyere ha ikike na ndị na-enye ọrụ, na-ekwupụta n'ụzọ doro anya ikike niile, ma ọ bụ nke egosipụtara, nke pụtara ìhè, n'usoro iwu, ma ọ bụ ihe ọzọ, gbasara Ọrụ ahụ. , gụnyere akwụkwọ ikike niile egosipụtara maka ịzụ ahịa, ịdị mma maka otu ebumnuche, aha na enweghị mmebi iwu, yana akwụkwọ ikike ndị nwere ike ibilite n'ụzọ nke omume, usoro arụmọrụ, ojiji ma ọ bụ omume ahia. Na-enweghị mmachi na ihe ndị e kwuru n'elu, Ụlọ ọrụ ahụ enyeghị akwụkwọ ikike ma ọ bụ ọrụ ọ bụla, ọ dịghịkwa eme ka ọ bụrụ ụdị ọ bụla nke ọrụ ahụ ga-emezu ihe ndị ị chọrọ, nweta nsonaazụ ọ bụla echere, dakọtara ma ọ bụ rụọ ọrụ na ngwanrọ, ngwa, usoro ma ọ bụ ọrụ ọ bụla, rụọ ọrụ. na-enweghị nkwụsịtụ, zute arụmọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụkpụrụ ntụkwasị obi ma ọ bụ enweghị njehie ma ọ bụ na njehie ma ọ bụ ntụpọ ọ bụla nwere ike ma ọ bụ dozie ya.
Na-ejedebe ihe ndị a kwurula, ma Companylọ ọrụ ma ọ bụ ndị na-eweta ụlọ ọrụ anaghị eme ụdị nnọchi anya ọ bụla, kwupụta ma ọ bụ gosipụta: (i) gbasara ọrụ ma ọ bụ nnweta nke Ọrụ ahụ, ma ọ bụ ozi ahụ, ọdịnaya, na ihe ma ọ bụ ngwaahịa. gụnyere n'elu ya; (ii) na agaghi egbochi oru ma obu ezighi ezi; (iii) banyere izi ezi, ntụkwasị obi, ma ọ bụ ego nke ozi ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla enyere site na Ọrụ ahụ; ma ọ bụ (iv) na Ọrụ ahụ, sava ya, ọdịnaya ya, ma ọ bụ ozi ịntanetị ezitere na ma ọ bụ n'aha oflọ Ọrụ enweghị nje, scripts, trojan ịnyịnya, ikpuru, malware, timebombs ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ.
Ụfọdụ ikike anaghị ekwe ka mwepu nke ụfọdụ ụdị akwụkwọ ikike ma ọ bụ mmachi na ikike iwu nke onye ahịa, ya mere ụfọdụ ma ọ bụ ihe niile nke mwepu na oke nwere ike ọ gaghị emetụta gị. Mana n'ọnọdụ dị otu a, mwepu na oke ndị akọwapụtara na ngalaba a ka a ga-etinye n'ọrụ ruo n'ókè kachasị ukwuu nke etinyere n'ọrụ n'okpuru iwu dị.
Iwu nke obodo a, ewezuga esemokwu ya na iwu nchịkwa, ga-achịkwa Usoro ndị a yana Ojiji gị. Ojiji gị na-eji ngwa ahụ nwekwara ike ịdabere na iwu obodo, obodo, mba ma ọ bụ nke mba ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere nchegbu ọ bụla ma ọ bụ esemokwu gbasara ọrụ ahụ, ị ​​kwenyere na mbụ iji dozie esemokwu ahụ na-agaghị site na ịkpọtụrụ Ụlọ ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa European Union, ị ga-erite uru na ntinye iwu obodo nke ị bi na ya.
Ị nọchitere ma nye ikike na (i) Ị nọghị na obodo nke nọ n'okpuru mmachi gọọmentị United States, ma ọ bụ ọchịchị United States ewepụtala nke ahụ dị ka obodo "ndị na-eyi ọha egwu na-akwado", na (ii) Edeghị gị aha na ya. Ndepụta gọọmentị United States ọ bụla nke ndị amachibidoro ma ọ bụ amachibidoro.
Ka e were ya na ejidere usoro iwu ndị a ọ bụla na-agaghị ekwe omume ma ọ bụ adịghị mma. N'ọnọdụ ahụ, a ga-agbanwe ma kọwaa ụdị ndokwa a iji mezuo ebumnobi nke ndokwa dị otú ahụ ruo n'ókè kasị ukwuu enwere ike n'okpuru iwu ọdabara. Ndokwa ndị fọdụrụ ga-aga n'ihu n'ụzọ zuru oke na mmetụta.
Ewezuga dị ka enyere ya na nke a, ọdịda iji ikike ma ọ bụ ịchọ ịrụ ọrụ dị n'okpuru Usoro a agaghị emetụta ikike otu onye nwere ikike iji ikike dị otú ahụ ma ọ bụ chọọ ịrụ ọrụ dị otú ahụ n'oge ọ bụla ka nke ahụ gasịrị, ma ọ bụ ịwepụ nke mmebi ahụ agaghị abụ nke a. ịwepụ mmebi iwu ọ bụla na-esote.
Enwere ike ịtụgharị Okwu na ọnọdụ ndị a ma ọ bụrụ na anyị mere ka ha dịrị gị n’ọrụ anyị. I kwenyere na ihe odide mbụ nke Bekee ga-emeri n'ihe banyere esemokwu.
Na naanị ikike anyị, anyị dobere ikike ịgbanwe ma ọ bụ dochie Usoro ndị a n'oge ọ bụla. Ọ bụrụ na ngbanwe bụ ihe, anyị ga-agba mbọ ezi uche dị na ya ịnye opekata mpe ụbọchị 30 tupu usoro ọhụrụ ọ bụla amalite. A ga-ekpebi ihe bụ́ mgbanwe ihe onwunwe n'aka anyị.
Site n'ịnọgide na-enweta ma ọ bụ jiri Ọrụ Anyị mgbe mmegharị ndị ahụ rụpụtara nke ọma, I kwenyere ka usoro iwu ndị edegharịrị ga-achịkwa gị. Ọ bụrụ na agree kwenyeghị na usoro ọhụụ, n'ogo ma ọ bụ na akụkụ, biko kwụsị iji weebụsaịtị na Ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na ịnwee ajụjụ ọ bụla gbasara Usoro na ọnọdụ a, You nwere ike ịkpọtụrụ anyị:
Site na email: kọntaktị@linuxcapable.com